सलमान खान एक्लोपनबाट पीडित रहेको खुलासा ! « Nagarik Khabar
सलमान खान एक्लोपनबाट पीडित रहेको खुलासा !
प्रकाशित मिति :6November, 2021 5:50 pm
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता तथा निर्देशक महेश माञ्जरेकरले अभिनेता सलमान खान बाहिर जति खुसी देखिन्छन्, भित्र भने एक्लोपनबाट पीडित रहेको खुलासा गरेका छन् । पछिल्लो समय ‘अन्तिम’ फिल्ममा सलमानलाई निर्देशन गरेका माञ्जरेकरले हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा धेरै कुरा खोलेका छन् ।
सलमानसँग माञ्जरेकरको लामो समयदेखि संगत छ । सलमान माञ्जरेकरलाई दाइजस्तो व्यवहार गर्छन् । माञ्जरेकरले सुटिङका क्रममा सलमानसम्बन्धी अनुभूत गरेका विविध कुराहरू दर्शकमाझ ल्याएका हुन् ।
‘सलमान बाहिर जति खुशी देखिन्छन्, भित्र भने उनी एक्लो छन,’ माञ्जरेकरले भनेका छन्, ‘एक्लै बस्दा उनी कताकता हराइरहेका हुन्छन् । उनलाई एक्लोपनले खाइरहेको छ । त्यसैले उनले अब बिहे गर्नैपर्छ ।’
माञ्जरेकरले सलमानको लाइफस्टाइलकाबारेमा पनि केही कुरा खोलेका छन् । ‘यत्रो ठूलो स्टार भएर पनि सलमान सामान्य जीवनशैली जिइरहेका छन्,’ माञ्जरेकर भन्छन्, ‘उनी अहिले पनि सिंगल बेडरुम भएको फ्ल्याटमा बस्छन् ।’ उनले सलमान घरमा प्राय ड्रोइङ रुमको सोफामा बसिरहने गरेकोसमेत बताएका छन् ।
‘जब म सलमानको घर जान्छु, उनी अधिकांश समय सोफामा बसिरहेका हुन्छन् । उनी एसी बन्द गरेर बसेका हुन्छन् । मलाई गर्मी हुन्छ । कति पटक त म आफैँले एसी चलाएको छु’, उनले भनेका छन्, ‘सलमान यति धेरै सफल छन् । तर, यो सफल मान्छेको पछाडि एकदमै मध्यम वर्गीय मान्छे छ । यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ ।’
सलमानले सुखदुःख साट्ने जीवनसाथी चुन्नै पर्ने बेला भइसकेको माञ्जरेकरको मुल्यांकन छ । ‘घरमा सलमानसँग आमाबाबु, भाइहरू अरवाज, सोहेल, भतिजाहरू जान्छन् । गफ गर्छन् । उनीहरूको आफ्नै दुनियाँ छ । तर, सलमान कहाँ जाउँन् रु त्यसैले उनले बिहे गरिहाल्नुपर्छ’, माञ्जरेकरको बुझाइ छ ।
उनले बिहेकाबारेमा आफूले धेरैपटक कुरा गरेकोसमेत बताएका छन् । ‘मैले सलमान अब तिमी बिहे गर, म तिम्रो बच्चा हेर्न चाहन्छु, भन्छु । तर, ऊ मेरो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिँदैन । केके भनेर कुरा टालिहाल्छ’, उनी भन्छन्, ‘सलमानसँग म जस्तो पनि कुरा गर्न सक्छु, जो अरु कसैले गर्न सक्दैनन् । तर, बिहेको कुरामा भने ऊ कहिल्यै सिरियस भएन । उसले बिहे नै गर्दैन कि भनेर मलाई चिन्ता लाग्छ ।’
बिहेको प्रसङ्ग आउँदा अनेक कुरा गरेर टार्ने गरेको भए पनि एक समय भने सलमान बिहेको मुडमा पुगेका थिए । उनी र तत्कालीन मोडल संगीत बिजलानीबीच सन् १९८६ देखि अफेयर चलेको थियो । करिब दश वर्ष उनीहरू सम्बन्धमा रहे । त्यतिबेला सलमान र संगीताबीच बिहे हुन लागेको, निम्तो कार्डसमेत छापिएको खबर आएको थियो । तर, कुनै कारणवस उनीहरूबीच बिहे हुन सकेन । त्यसपछि सलमानको नाम थुप्रै हिरोइनहरूसँग जोडियो ।
आमाबाबुसँग अनुहार मिल्ने बलिउडका स्टार किड्स
काठमाडौँ । बलिउड जोडी अजय देवगन–काजोलका जेठी छोरी नायस हालका दिनमा आफ्नो ग्ल्यामरस तस्बिरका कारण
चार वर्षदेखि ओच्छ्यानमा थलिएका बिरामी कोरोना खोपले उठेर हिँडे
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको तेस्रो महामारीका कारण छिमेकी राष्ट्र भारतमा खोप लगाउने कार्य तीब्र गतिमा
इशा कार्कीको ‘तिमी र म घुम्न जाउँ’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बसोबास गर्दै आएकी लोकप्रिय गायिका इशा कार्कीको नयाँ गीत ‘तिमी
आहा रारा गाोल्डकप फुटबल आजबाट सुरु हुँदै, दर्शक नहुने
पोखरा । आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २०औं संस्करण आजबाट सुरु हुँदैछ । पोखरा रंगशालामा
गण्डकीका तीन होमस्टेले विकास बजेट पाउने
लमजुङ । गण्डकी प्रदेशको होमस्टे परियोजनाका लागि लमजुङका तीनवटा होमस्टे छनोट भएका छन् । गण्डकी
वन मन्त्री र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबीचको विवाद उत्कर्षमा
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास
सात कम्पनी कलोसूचीमा, तीन बर्षसम्म काम नपाउने
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा कम्पनिलाई कालो सूचीमा
साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाको ६.६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडियो
खोटाङ । खोटाङको ६.६ मेगावाट क्षमताको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिएको